Iakhawunti ye-ECN-Vula eyona Akhawunti yeNtengiso ye-ECN
Ukusasazeka 0.0 iipete Ikhomishini yorhwebo 0 $
Yenza okulungileyo kwi-Forex yorhwebo
utyalo-mali kunye norhwebo ngexabiso eliphantsi kwaye
Yiya kwiZero ukuya kwiHero
VULA I-ACCN YAMI-ACCENT XL
BHALISA NE FACEBOOK BHALISA NE-GOOGLE
Iinkonzo Zakho zoNgezelelweyo zokuThengisa
Ukufikelela kwi-1: 500
Izixhobo zokuRhweba eziPhambili
Kutheni uhlala kwindawo efanelekileyo xa unako
ukugqwesa hayi ngohayi imali eyongezelelweyo?
Ivakalwe "I-Akhawunti ye-Forex Trading"
ngabarhwebi kunye neengcali zeshishini
kwii-UK FOREX Awards 2017
Ukuphumelela kwamabhaso, awayevotelwe ngokuzimela ngabathengisi ngokwabo, isinyanzelo kwimizamo eqhubekayo ye-FXCC yokuphuhlisa nokutshala kwimpahla yayo yokuthengisa ukuze kuxhamle abathengi bayo.
Ngabarhwebi be-akhawunti ye-ECN XL bafumana umxube wezinga leenkonzo ze-VIP kunye nokuthengwa kweendleko eziphantsi. Ngenxa yesi sizathu, i-Akhawunti ye-FXCC ECN XL yaba yi-Traders #1 yokukhetha.
Ukusebenza okwenyaniso kwe-STP / ECN
Ukuqinisekisa ukuba zonke ii-odolo zi
wenziwe kukhuphiswano lokwenyani
kunye nendlela ecacileyo
Amathuba akho okurhweba kunye nempumelelo eyinokwenzeka ngokuzenzekelayo kuphuculwe ngokusetyenziswa ngokuthe ngqo ngokuzaliseka kwenkqubo, kwi-ECN (inethiwekhi yoxhumo lwenethiwekhi).
Abaxhasi be-FXCC banokurhweba phambili ngokukhawuleza, bathathe inzuzo yokusasaza ngokusasaza, amaxabiso angcono asebenzayo kwimarike, ngokuqinisekiswa kwangoku. Ayikho idesksi yokusebenza ukungenelela, akukho zicatshulwa kwakhona.
Ukususela kwiZERO ukuya kwiHero ..
Nciphisa iindleko zakho zokurhweba
zero kwaye wandise eyakho
I-ECN XL, eyaziwa ngokuba yi-ZERO akhawunti yenye yeyona ndlela ixabisa kakhulu i-akhawunti ye-forex yokuthengisa.
Jabulela izibonelelo kwaye uqale ukurhweba ngokusasazeka ukususela kwi-PNNX ephantsi kunye ne-0.0, ii-commissions zero, zero swaps, zero mark kunye ne-zero iifom.
Khetha iSiphatho Esilungileyo
Jabulela uluhlu olubanzi lweendawo zokuthengisa ezikhoyo kwiinkqubo zokusebenza kunye nezixhobo - iWindows, iOS ne-Android. Ukuphakamisa ukurhweba kwakho kunye nezixhobo ezibalulekileyo zokuhlalutya kunye nokutshintsha.
Zama ii-Forex Platforms zethu ngoku
Vula idilesi ye-ECN uvule i-akhawunti ye-ECN ephilayo